लोग्नेमान्छे (कथा) – Chitwan Post
अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्छ, समय बित्न कति नै बेर लाग्दोरहेछ र ! धार्मिक परम्परा अनि सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार पल्लाघरे साइँलाले पवित्रालाई घर भित्र्याएको पनि छ महिना बितिसकेछ ।
बिहेपश्चात् आफ्नो परिवार अनि भावी सन्ततिप्रतिको जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य अनि उज्ज्वल भविष्य कसरी बिनाव्यवधान पार लगाउने भन्ने सोचले साइँलालाई दिनरात चिथोरिरह्यो । फलस्वरुप, नचाहेरै भए पनि विदेशिनुसिवाय अरु विकल्प देखेन उसले र ऊ बाध्य भएर खाडीतिर उड्ने तयारी गर्न थाल्यो । हुन पनि गरिबी र अभावैअभावले पिल्सिएका अधिकांश हामी नेपालीहरुको बाध्यता भनेको त्यही खाडी मूलुक नै त हो ।
हाम्रो समाजमा वल्लो घरकाले पल्लो घरको खिचातानी गर्ने, एउटाको प्रगतिमा अर्को जल्नेहरुको कमी नै कहाँ छ र ? साइँलाको छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरु हुनु कुनै नौंलो कुरो थिएन ।
‘हेर हेर, यो साइँलोको बुद्धि ! यस्तो दुई जीउ भएकी आफ्नी जहानलाई छाडेर विदेश जान लागेको, कस्तो लोग्ने हो यो ? यस्तो बेलामा झन् लोग्नेको माया, साथ, सहयोग पाउने बेला हो, पवित्रा एक्लै कता के गर्छे र बरा…! लोग्ने भनेको त साथमै पो हुनुपर्छ त ।’ आदि इत्यादि छिमेकीका अनेकौँ तानाहरुका बाबजुद पनि बाध्यताले उसलाई डो¥याई डो¥याई खाडी पु¥र्याएरै छाड्यो ।
दाइबुचु : कला र साहित्यको संगम [यात्रानुभूति]
अप्रत्याशित खुसी [लघु कथा]
प्रेमको जलन [कविता]
साइँलो खाडी पुगेको केही महिनापछि एकदिन पवित्रालाई सुत्केरी व्यथाले चाप्न थाल्यो । छिमेकी तथा आफन्तहरुको साथ र सहयोगले पवित्रालाई अस्पताल पु¥याइयो । ठूलो शल्यक्रियापश्चात् उनले साह्रै राम्री एक छोरीको जन्म दिइन् ।
उता, साइँलो पनि आफ्नो दुईवर्षे करार अवधि सकेर स्वदेश फर्कियो । आँगनको डिलमा बसी आफ्नी प्राणप्यारी श्रीमती अनि छोरीसँग वर्षौंको तड्पाइलाई खुसीसँग साट्दै थियो । साँच्चै भन्ने हो भने आफ्नो परिवारसँगको यो खुसीको पलमा समय पनि जहाँको त्यहीँ रहिदिए हुन्थ्यो भन्ने उसलाई लाग्थ्यो । जुन कुराहरु उसको अनुहारमा प्रस्टै देख्न सकिन्थ्यो ।
‘तँलाई नै तेरी श्रीमतीको मतलब छैन भने हाम्लाई पो के मतलब भो र ! कम्ता दुःख पाएनम् तेरी श्रीमती सुत्केरी हुने बेलाँ । तँलाईचाहिँ पैसो भएसि पुग्यो । अब त जे परे पनि हामी फर्केर नि हेर्दैनौँ, तेरा घरतिर । तँ जे सुकै गर्, श्रीमती र छोरीलाई छाडेर विदेशाँ गए नि जा, बसे नि बस्’ भन्दै पल्लाघरे ठूलीकाकी नमज्जाले च्याँट्ठिइन् साइँलासँग ।
‘श्रीमती र छोरीको मतलब नहुँदो हो त पराईको देशमा पसिनासँग श्रम साट्ने रहर कसलाई पो हुन्थ्यो होला र काकी !’ भनूँजस्तो त भएको थियो साइँलालाई, तर भनेन । ऊ चुप्प लागेर ठूलीकाकीका कुरा एकतमासले सुनिमात्रै रह्यो । गाउँलेहरुका यस्तै–यस्तै बचनहरुले घोच्दै जान थाल्यो र अन्ततः ऊ आफ्नै परिवारसँग बस्ने, विदेश नजाने निर्णयमा पुग्यो । छिमेकीका कुराहरु पनि उसलाई ठिकै लाग्न थाल्यो ।
समय बित्दै गयो । एक–डेढ वर्षको अन्तरालपछि पवित्रा पुनः गर्भवती भइन् । साइँलाले यो समयमा कहिल्यै पनि श्रीमतीलाई भारी काम गर्न दिएन । साह्रै राम्ररी स्याहारसुसार र पालनपोषण ग¥यो, मायाको कत्ति पनि कमी हुन दिएन आफ्नो परिवारलाई । अब छिमेकीहरुले साइँलाका श्रीमान्श्रीमतीप्रति काहीँकतै केही खोट लगाउने ठाउँ नैं भेट्टाएनन् ।
रातको बाह्र बजेको हुँदो हो । अचानक श्रीमती (पवित्रा)लाई सुत्केरी व्यथाले गाह्रो पार्न थालेपछि साइँलाले उनलाई अस्पताल पु¥यायो । पवित्राको पहिलोपटकजस्तै यसपटक पनि ठूलै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखियो । शल्यक्रिया तुरून्तै नगरे आमा तथा बच्चा दुवैको ज्यान बचाउन नसकिने कुरा सुनाए डाक्टरहरुले । स्वदेशमै बसी ज्याला–मजदुरी, बनीबुतो गरी कमाएको दुई–चार पैसाले श्रीमतीको शल्यक्रिया गर्न एकछेउ पनि नपुग्ने देखेपछि साइँला धेरै नै अत्तालियो । छिमेकी र आफन्तसँग चारैतिर हात फैलायो, तर कसैले पत्याएनन् । सम्झिनेजति सबैलाई सम्झियो उसले । तर, अहँ उसलाई कसैले सम्झेनन् । पहिले पो विदेशबाट उसले पैसा पठाएको थियो । भनेकै समयमा श्रीमतीको शल्यक्रिया राम्रोसँग सफल भयो । पैसाकै कारण केही गाह्रो–साह्रो भएन र त छिमेकी र आफन्तहरुलाई पनि ढुक्क थियो । तर, यसपटक भने परिस्थिति उल्टो भैदियो । ‘छन् गेडी सबै मेरी’ भनेझैँ सायद त्यसैले होला कोही आइदिएनन् त्यहाँ साइँलालाई होस्टेमा हैँसे गर्नाका लागि । बिचरा… साइँला एक्लै प¥यो !
साइँलाले आफ्नी गर्भवती श्रीमती छाडेर विदेश गयो भनी पहिले पहिले कुरा काट्नेहरु पनि रमिते भइदिए त्यतिबेला । ऊ चारैतिर भौँतारियो । आफ्नी प्राणप्यारी अस्पतालमा पैसाको अभावले छटपटाइरहेकी छ, यो पीडाले ऊ बौलाहाजस्तो भयो र कतै केही उपाय नैं नदेखेपछि आफ्नो सानो टुक्रो पाखो बारी र घर जिम्बालकहाँ रातारात बन्धकी राखी पैसा बोकेर हतार–हतार अस्पताल पुग्यो ऊ । अफसोस ! ऊ अस्पताल पुग्नुभन्दा केही क्षणअगाडि नै उसकी श्रीमतीको प्राण–पखेरू उडिसकेको थियो । साइँला पुर्पुरोमा हात लगाउँदै थचक्क भुइँमा बस्यो । अस्पताल नै थर्किने गरी रोयो र करायो, तर पनि उसको रूवाइ कसैको कानसम्म पुग्न सकेन । उसलाई कठै भन्न न छिमेकी आए त्यहाँ, न त कोही आफन्त नै । ऊ साह्रै मर्महत भयो । चारैतिर अन्धकार देख्न थाल्यो । अब ऊसँग पवित्राको नासो एउटी छोरीसिवाय केही रहेन ।
‘कस्तो नामर्द ! गर्भवती बनाउन सक्नेले खर्च पनि जुटाउन सक्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ, जमाउनुपर्छ भन्ने सोच्नु नि ! यसकी श्रीमती मरेकी होइन, यसले नै मारेको हो । यो पापी, हुतीहाराजस्ता त हाम्रा छोरा–ज्वाइँ कोही नहुन्, हे भगवान !’ पहिले गर्भवती श्रीमतीलाई एक्लै छाडी विदेश गयो भनी खुब घृणा गर्ने ती गाउँले छिमेकीहरुले फेरि उसलाई धारे हात लगाउँदै सत्तोसराप गर्न थाले । बिचरा साइँला ढुङ्गोसरह बन्यो । मरौँ भने पनि तामाकी टुसाजस्ती छोरी छे, ऊ त्यही छोरीको कारण मर्न पनि सकेन । शोकपश्चात् बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सम्हालेर त्यही एउटी छोरीको मुख हेर्दै उसलाई पढाउन र बढाउनतिर लाग्यो साइँला ।
समय बित्दै गयो । छोरी पनि पढ्दै अनि बढ्दै गई । ज्ञानगुनका कुराहरु सिक्न थाली । मनमा अठोट लिई उसले, आफू एउटा ठूलो डाक्टर बनी दीनःदुखीहरुको सेवा गर्ने ताकि पैसाकै अभावमा आफ्नी आमाले झैँ अब अरु कसैले पनि अकालमैँ मृत्यु वरण गर्न नपरोस् । तर, साइँलासँग आफ्नी छोरीलाई डाक्टर बनाउन सक्ने हैसियत नै पो कहाँ थियो र ! ऊ छोरीलाई होस्टेलमा राखी छोरीको सपनालाई मूर्तरुप दिन फेरि विदेश हानियो ।
आखिर साइँलाले कहाँ र कहिलेचाहिँ आफ्नो लागि बाँच्यो ? कहाँनेर उसको स्वार्थ देखियो ? कथाको पात्र साइँला त एउटा उदाहरणमात्रै हो । हामीमध्ये अधिकांश लोग्नेमान्छेहरुको नियति भनौँ, कथा–व्यथा या बाध्यता यही हो । जुन हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहने छ सायद !